Ungawaguqula kakuhle njani amagqabi ephepha kwitafile yemibhiyozo? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ziyiphi iiflethi zephepha ezimnandi kwietafile zeeholide?
Zama ukwenza njalo, ndicinga ukuba yinto yokuqala.
Unokuqala ukuzisa i-spoonful ye-tar.
Okukhona ii-napkins zihle kakhulu zibekwa, zona ziya zisiba mbi ngakumbi xa iindwendwe zikhupha enye ingubo, kwaye wonke umntu uyazikhupha, ndikholelwe, umntu akonwabanga, kwaye wonke umntu kunyanzelekile ukuba amncede endaweni yokumamela i-toast. I-napkins zamaphepha zibekwe kwimiphetho yetafile, ukuba itafile ingaphezulu kwe-8 yabantu. Kwaye i-napkins zamaphepha azenzelwanga ukuba zihombise itafile; endaweni yoko, zisebenzisa ii-napkins zelaphu zokuhombisa, zona, enyanisweni, eziguqula itafile ibe yinto entle kakhulu. Izitya ezininzi. Ukubekwa ngokutyibilikayo kunye neesaladi kungumhlobiso wetafile olungcono.
Kumfanekiso wokuqala. I-Napkins kufuneka ibe ngamalaphu, amaxesha amaninzi kwiindawo zokutyela kwiindibano ziyabeka kwaye zintle ngakumbi kwiglasi ye-champagne. Kwaye umfanekiso wesibini ngamaphepha amaphepha. Zisongeka kumxantathu kunye nakwizandla ezivulekileyo emva kwenye zidityaniswe njenge fan. Stack kakhulu kangangokuba umphambili ubonakala ngathi yi-zigzag, kodwa ezantsi yayingumgca othe tye, ujongeka kakhulu njengokuhamba ecaleni komjikelezi wesitroli. Ukukusonga ngokwahlukileyo kuthetha ukutyumza iphepha lephepha, kodwa kukho iipenki zelaphu zezi njongo.
Kukho enye indlela emnandi yokugoqwa kwezipapasho zetafile yomthendeleko.
Kuyenzeka ukuba intyatyambo yokwenene, kwaye intle kakhulu.Yinyani, oku awudingi nje ii-napkins zemibala eyahlukeneyo, kodwa kunye nocingo.
Kodwa iindwendwe ziya konwaba ngokucacileyo ngumhlobiso weetafile ezinjalo.
Jonga le vidiyo yesifundo ngendlela yokwenza le ntyatyambo.
Unako, ngokuqinisekileyo, ukubeka ii-napkins kwaye zilula, kodwa ziya kubonakala zihle.
Nantsi isifundo sevidiyo.
Kwaye apha kukhetho olulula, kodwa luhle kakhulu.
Mhlawumbi umntu uza kuyithanda le ndlela
Zininzi iindlela, ungazama oku, kodwa apha kufuneka uncame.
Ndinganikezela nangeenketho ezininzi eziphathwayo ezihonjiswe kakuhle, kungekuphela nje kwitheyibhile yeholide, kodwa nakweyiphi na itafile (kuba, kufuneka uvume, kuya kufuneka uzonwabise kunye namehlo akho kwiintsuku eziqhelekileyo, ezibonakala zingenakuthengiswa).
Nalu umbono onomdla kwitafile yoNyaka oMtsha:
Yonke eminye imizekelo ikwindawo yonke, ngaphandle okanye ngaphandle kwesizathu. Intliziyo:
Esi sitya sinokusongelwa:
Kwaye ngoncedo lwalo mzekelo, unokuhombisa ngokufanelekileyo nayiphi na i-cutlery:
Umfazi ngamanye amaxesha, xa ixesha elaneleyo, elihombisa itafile yomthendeleko nge napkins ezilungiselelwe kakuhle. Uyakonwabela, abantwana - abazukulwana kunye neendwendwe ezinje.
Nantsi intyatyambo evela kwi-napkins ayifaka kwiiplate.
Imiyalelo yesinyathelo ngesinyathelo:
Yandisa i-napkin, yonge, njengakwifoto:
Guqula i-napkin, ugobe amacala angaphandle abe embindini kwakhona.
Yandisa i-napkin, ufumana amaxande asibhozo:
Ngoku kuya kufuneka uzenze kabini ngaphezulu, usonga ikhonkco
Iya kujongeka njenge fan:
Oonxantathu bevolumetric benziwa kwipalal nganye, bethambisa kuzo zonke iifolda ngaphakathi kubambo:
I-rbra egqithisileyo idibanisa.
Kodwa ngala manyani uthanda ukuhombisa i-cutlery:
Zininzi iindlela, into ephambili kukuthatha isigqibo sokuba uthanda ntoni kanye. Ndihlala ndingenalo ixesha lokwenza lento kwaye ndicela umyeni wam, ayokujonga kwi-Intanethi ngeendlela ngevidiyo okanye ifoto aze andilungiselele i-napkins ngaphambi kwam. Ukuba ndiyayenza le nto, ndiye ndonyula indlela ngokukhawuleza, zintle, zikhona nezinye! Ndicebisa ngeendlela ezininzi endizithandayo:
Ukwenza i-napkins ibonakale intle kwitafile yemibhiyozo, kuya kufuneka ungazi nje ukuba uzisonge njani, kodwa uya kufuna nesakhono esithile. Okokuqala, ziqhelise ngaphandle kwemibhiyozo yeholide, zama nje kuqala kwizikimu ezikhanyayo, wandule ke uqhubele phambili kwizona zinzima ukuze kungabikho ntelekelelo; Ukumangalisa.
Nantsi indlela elula yokusonga i-napkins ngohlobo lwe-Qu; Fir-Treequot;; ilungele itafile yoNyaka oMtsha:
Kananjalo ayisiyondawo inzima kakhulu yokongeza i-napkins ngohlobo lwe-Qu; Châteraquot:
Okulandelayo, yongeza le patheni ilandelayo ibizwa ngokuba yi-Qu; (iya kusebenza kunyaka olandelayo):
Etafileni kujongeka kukho i-chic, le quot; inokuphinda isongelwe ngepani yezicubu.
Xa kulungiswa itafile kuphela iipenki zelineni, ezibanika imilo entle okanye encomekayo. I-napkins zamaphepha azisongeli, kodwa zibeka nje kwisibambisi esibhinqileyo.
Iipenki zelinen zenzelwe ukukhusela iimpahla kwiimpahla, i-splashes, amaconsi ngengozi yokutya okanye iziselo. Sula iminwe yakho ngemisonto yangaphantsi esongelwe ukuba uyingcolile. I-napkins zamaphepha zenzelwe imilebe yomlomo emva kokutya kunye neminwe emdaka. Akunakulindeleka ukuba ukonwabele ukosula imilebe yakho ngesiqwengana sephepha, ebeliphambi kokuba umntu afumbe ezandleni zakhe, enika imilo engacacanga. Ayisiyoococeko.
Iilineni okanye iitawuli zephepha zenzelwe ukuba zingasetyenziselwa ithawula.
Ukulungiselelwa kwetafile yemibhiyozo, njengenketho, ndicebisa ukwenza i-rose evela kwipenki yephepha kwaye uyihlobise ngesiphatho esiphethe. Iya kwandula ke imigaqo yococeko ihlonitshwe kwaye udidi lwenkosi luboniswe.
I-rose evela kwi-napkin yenziwa ngokulula:
Ngeyiphi na iholide ofuna ukuyenza into ekhethekileyo, kodwa ayinguye wonke umntu owaziyo ukuba into ekhethekileyo inokwenziwa kwiipanip iphepha eliqhelekileyo. Amaphepha anjalo ephepha anokuhombisa nayiphi na itafile kakuhle, kufuneka ukwazi nje ukuba uzisongele.
Apha, umzekelo, unokusongelwa amaphepha amaphepha:
Kodwa nantsi enye indlela yokwenza iphepha lephepha: